Shiikh Caan ah Oo Yiri “Dumar Badan Oo La Guursada Waa Xaqdarro” | Xaqiiqonews
Shiikh Caan ah Oo Yiri “Dumar Badan Oo La Guursada Waa Xaqdarro”
Dr Axmed oo ka tirsan jaamacadda Al-azhar ayaa sheegay in Arimaha U baahan in wax laga badalo Islaamka dhaxdiisa ay ka mid tahay guur badsiga.
Shiikha oo la hadlaayey barnaamij todobaadle ah oo ka baxa mid ka mid ah Tv-yada dalka Masary ayaa ka hadlay arinta guurka badisga dumarka isagoo ku tilmaamay garddaro iyo dulmi lagula kacayo dumarka iyo caruurta.
Shiikha ayaa yiri “waxa aan si khalad ah u fahanay Qu,aanka iyo Sunada Rasuulka Sc, maxaa yeelay dadka inta badan kaliya waxa ay aqriyeen qeybta aayadda micnaheedu tahay “U guursada, laba laba, seddex seddex iyo afafar, balse waxaa la iska illowsanyahay qeybta kale ee aayadda”.
Sheikha ayaa is weydiiyey “Ninka muslim ah si dhab ah miyuu xor ugu yahay in uu guursada labo,seddex ama afar naag, mise xornimadiisa waxa ay ku xiran tahay shuruud”
Shiikha ayaa Sheegay in xornimada ninka ee guur badsiga ay tahay mid ku xiran sharuud, waxa uuna tusaale u soo qaatay xornimada qofka uu u leeyahay in uu salaadda gaabiyo, taasi oo ku xiran shuruud ah qofka in uu yahay musaafir, si taasi la mid guurka badan waxaa ku xiran shuruud ah ninka in uu sameyn karo “Cadaalad”.
Waxaan shaki ku jirin in hadalada noocan ay soo dhaweyn kala kulmi doonaan, Ururada Haweenka iyo Dadka u dooda xorriyadda